Job wareysi caawimo qaxootiga iyo muhaajiriinta | The Refugee Center Online | Refugee Center Online
Ma aad martiqaaday wareysi shaqo? Waxaa laga yaabaa inaad dareento habdhiska. Dadka intooda badan samayn. Laakiin barbarta su'aalo caadi ah ka dhigi doonaa inaad dareentid kalsooni dheeraad ah. Baro sida loo diyaariyo waraysi shaqo kasta.
aasaaska wareysi Job
wareysi shaqo A waa wada hadal u dhexeeya adiga iyo loo shaqeeyaha. Inta lagu jiro wareysiga, loo shaqeeyaha ku weydiin doonaa su'aalo badan. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo diyaariyo waraysi. Waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee helitaanka shaqo.
Loo shaqeeyeha wuxuu ku weydiin doonaa ah oo ku saabsan waayo-aragnimo shaqo. Waxay rabaan in ay ogaadaan oo ku saabsan waxbarashada iyo wixii tababar aad lahayd. Jawaabahaaga inay wareystaan ​​su'aalo sidoo kale muujinaya nooca qofka waa. Haddii aad ogtahay sida loo diyaariyo waraysi, ku tusi doono u shaqayso in aad tahay qof wanaagsan shaqada.
waraysiyo Job had iyo jeer ma qaadan meel qof. Waxaa laga yaabaa inaad marka hore wareysi telefoon. Isticmaal fursad this si ay u muujiyaan sida aad u caawin lahayd shirkadda. Haddii aad ku gudubto wareysi taleefanka, ka dibna lagu waraysto qof. Shaqooyin badan, waxaad heli doontaa mid wareysiga telefoonka iyo ugu yaraan mid ka mid ah-qofka waraysiga. Mise waxay go'aamin kartaa ka video call a aad la.
Talaabooyinka si ay isugu diyaariyaan waraysiga
Waa muhiim in la diyaariyo wareysiga. Shirkadda kasta waa ka duwan yahay sidaas darteed waa in aad ku dhaqmaan mar kasta.
Ogow wax walba oo aad awoodid ku saabsan shirkadda. Haddii aad su'aalo iyo jawaabo muujiyaan aqoonta ku saabsan ganacsiga, waraysanaya ogaan doontaa in aad daryeesho ku saabsan shaqada.
Waxaad ka akhrisan kartaa bogga internetka ee shirkadda macluumaadka. Waxa kale oo aad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan shirkadda on LinkedIn. Raadi jawaabta su'aalahan:
Waa maxay gool ee shirkadda?
Waa maxay shaqada ee shirkadda?
Waa maxay shirkadda ugu weyn mashruuca / shaqada hadda?
Sidee xirfadahaaga ka faa'iidaysan karaan shirkadda?
Raadi magaca shirkadda on Google ka dibna riix "news". Haddii aad aragto news wanaagsan, aad u sheegi kartaa in aad waraysi.
Raadi shirkadda on Glassdoor, taas oo ah website halkaas oo shaqaalaha ka hadlaan shirkadda. Haddii ay meel dadweynaha, sida dukaan ama makhaayad, haddaba gala oo booqo. Sida aad samayn aad cilmi, bilaaban ka fikirka ah ee qaar ka mid ah su'aalaha aad weydiin kartaa in aad wareysiga oo meel ku qoro.
Dib aad resume
Aad hore u sameeyey, oo u soo diray in aad resume. Loo shaqeeyeha wuxuu ku weydiin doonaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan wax qoran on your resume. Waxaa muhiim ah in aad ka akhrisan aad resume hor waraysiga. Waa in aad ka sheekeyn karo shirkadaha aad shaqeysay ama si iskeed ah, waayo, ee la soo dhaafay.
Ogow meesha aad u socotid
Haddaad awoodid, safar dhaqanka meesha waraysiga ka hor maalinta wareysiga aad. Baro wadada aad. Haddii ay dhismaha weyn, heli galo xaq u. Markaas waxaad la diyaarin doonaa, waayo, maalintii.
ka hor Qorsheeyaan oo naftaada siiso waqti dheeraad ah. Waxa fiican in ay goor hore ka badan daahay sababtoo ah waxaad u dhow sugi karo. Imow waraysiga 10 Daqiiqadihii hore, laakiin aan ka horeyn.
In shaqaale fiican loola jeedaa soo socda in ay ka shaqeeyaan waqti. In waqtiga waa mid aad u muhiim ah ee USA. Imaatinka aad wareysi dabayaaqadii muujinaysaa waraysanaya in aad laga yaabo in daaha shaqada haddii aad kiraystay. Waxaa hoos u doono fursada la soo kiraystay aad xataa haddii aad leedahay xirfadaha wareysi shaqo weyn.
Haddii ay tahay wareysi video ah, waxaad weli u baahan tahay in ka hor la qorsheeyo oo naftaada siiso waqti dheeraad ah. Hubi in aad ku sugan tahay meel aan buuq lahayn oo aad doonto ma is gooyey. Haddii aanad haysan internet ama kombiyuutar guriga, heli saaxiib kii sameeya iyo waraysiga gurigoodii. Waxa kale oo aad la hadli kartaa laybareeriga degmadaada si aad u aragto haddii ay ku caawin doona wuxuu qotomiyey waraysigaaga. Xitaa waraysi video ah, aad u baahan tahay in ay diyaar u noqon oo hore sugayaan dhowr daqiiqo.
Fiiri xirfadeed xitaa haddii wareysi shaqo aad dhici doona on call a video. Halkan waxaa ku qoran dhowr siyaabood oo sida loo diyaariyo waraysi by raadinaya xirfadeed:
Waa doonayaa ee daahirsanow
Had iyo jeer xiro dhar nadiif ah si wareysi. Qubeyso ka hor inta waraysiga socday. Caday ilkaha iyo shanlee timahaaga.
Ha noqon mid aad u caadi ah
Ha xirtaan kabo ama ku dhajisan-Mail waraysiga. Gasho sharabaad iyo kabaha. Ha xiran karaan dhar caadi ah sida jiinis ah ama a t-shirt. Ha xiran gaab ama dhaladooda taangiga. Ha gashadaan koofiyado, saftay Hase yeshee,, ama muraayadaha wareysi. Iska ilaali dahabka in uu yahay mid aad u ballaaran iyo midabo.
Xiro dhar ganacsi
dhar Professional waayo, raggii waxay ka dhigan tahay xidhashada saraawiisha aan jiinis iyo maaliyada dheer-darafta la badhamada. Haddii shaqo uu yahay mid aad xirfadeed, waxaad u baahan doontaa joog iyo warega. Waayo, haweenka, dharka a suubban ama tosho la darafkii ama smart a surwaal ay noqon doontaa mid la aqbali karo. Laakiin aad uma baahna in ay qaataan lacag badan! Waxaad ka heli doontaa dharka wareysi wanaagsan ee aad dukaanka gacan labaad degaanka, sida niyad samida.
Ka fogow cabidda sigaarka iyo khamriga
Ha calalin lowska betel ama tubaakada ka hor ama inta lagu jiro wareysi. Ha cabin sigaar ama ha isticmaalin khamriga ka hor wareysi. Sigaar samayn kartaa dharkaaga uriso xun. Khamriga lama oggola at shaqo kasta.
gacan, haddii aad awoodo aan, sababtoo ah diinta ama dhaqanka
Isgacan waa wax caadi ah in America. Waa ok ragga iyo dumarka si ay gacan kasta oo kale. Haddii aadan rabin inuu gacan qaado, waa okay. halkii, meel aad gacmihiinna oo dhan xabadka iyo wax yar madaxaaga u janjeeri weeraryahanka. waxaad dhahdaa si cad u, "Waa sidaas kulan wanaagsan. Waad ku mahadsan tahay waqtiga qaadashada maanta ii waraysi. "Dadka qaar waxaa laga yaabaa in la yaabay, in aadan rabin in ay wadaagaan gacmaha. Haddii aad dareento raaxo, sharax in aad salaantid gacan jinsiga ka soo horjeeda ayaa ka soo horjeeda Diinta.
Dhoola caddee oo ka dhigi xiriirka indhaha
Isku day in aad iftiimisid oo fiiriyaa dadka isha. Tani waxa ay muujinaysaa waraysanaya aad tahay mid fiican oo saaxiibtinimo. Inkasta oo tani laga yaabaa in uu ka duwan yahay in dhaqankaaga, waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad samayn karto oo dalka Mareykanka ah inuu kaa caawiyo inaad shaqo hesho. Waayo, Americans, samaynta indhaha muujinaysaa ixtiraam iyo caawisaa dadka aad ku kalsoon tahay. Marka aad timaadid waraysiga, aad salaanta laga yaabaa in ay dad kala duwan. Waa inaad edeb leedahay in qof kasta oo aad la kulmi iyo isku dayaan si ay u eegaan oo ilka ee qof kasta.
Hubi in aad telefoon la demiyo
telefoonka Dami hor waraysiga. Ha fiirin aad telefoon. Haddii aad illowdo, oo wuxuu siddooyinkii ku telefoonka aad, isla markiiba waxaa lagu aamusiyo, raalli kala go 'ah. Ha u jawaabi!
Weydii ugu yaraan hal su'aal
Ka hor inta aanad iman waraysiga shaqada, diyaariyo liiska ku saabsan 5 su'aalo. Su'aaluhu waxa ay noqon karaan ku saabsan shirkadda guud ahaan ama ku saabsan doorka. Weydii su'aalo muujinaya in aad xiisaynayso shaqada iyo shirkadda. Ma ma su'aalo ku saabsan mushahar ama fasax weydiisan ilaa aad ka muujisay xiisaha ee shaqada iyo ganacsiga. Weydii su'aalo aad dhamaadka waraysiga, ama marka loo-shaqeeyahaagu wuxuu leeyahay, "Ha aad qabto wax su'aalo ah?"Haddii su'aalahaaga oo dhan ayaa durba la jawaabay, markaas uu ku odhan, "Maxay yihiin tallaabooyinka xiga ee?"ama, "Markii aan ka filan karaa in ay maqlaan waxaad ka?"
Isku day in aad isku dejiso oo aad sameyso fiican
Xusuusnow, aad hore u samaysay qeybta ugu adag maxaa yeelay, aad hore u heshay wareysi shaqo ee. Waxaad bartay sida loo diyaariyo waraysi iyo sidoo kale aad u darabnay. Hadda waxaa la joogaa waqtigii la kaliya samayn aad ugu fiican. Qof kastaa khalad waa inta lagu jiro waraysiyada. Haddii aad qalad, qaado daqiiqad si ay u yara iyo dib u bilowdo.
Weydii kaararka ganacsiga
Marka waraysiga ka badan yahay oo aad helayso inuu ka tago, weydiiso kaararka ganacsiga dadka aad la hadlay. Markii ay iyaga gacanta idiin soo, iyaga mahad edeb leh. Haddii aanay haysan kaarka ganacsi, weydii in ay qorto in ay magaca iyo email address buuxa. habkan, waxaad yeelan doontaa macluumaadka lagala xariiro si aad iyaga u soo diri kartaa mahadnaqid ah aad la soco.
U dir mahadnaqid ah aad email ama warqad ka dib markii wareysi shaqo ee
Waxaad soo diri kartaa mahadnaqid ah inaad ogaataa sida warqad loo marayo xafiiska boostada ama email. Dadka intooda badan isticmaalaan email. Haddii aad illowday in aad weydiisato kaarka ganacsi, waxaad email u diri kartaa ama wac xafiiska weydiina macluumaadka xiriirka.
In aad mahadnaqid aad la soco, waa in aad ku sheeg:
In aad u mahadnaqey markii ay ku bixisay wareysanaya
Waa maxay xirfadaha aad keeni kartaa in shirkadda
Si aad u sugaynaa in maqalka iyaga ka ugu dhakhsaha badan
Hoos waxaa ku qoran tusaale ka mid ah mahadnaqid ah aad la soco:
Gacaliye [Name Waraysi],
Waad ku mahadsan tahay wax badan u ila kulmo maanta. Waxa ay ahayd sida raaxo ah in badan oo ku saabsan kooxda iyo booska bartaan. Waxaan ahay mid aad u faraxsan oo ku saabsan fursad ay ku biiraan [magaca shirkadda] iyo caawin [keeno macaamiisha cusub / adeegi aad macaamiisha / wax kale oo aad samayn lahaydeen] aad la leedahay kooxda.
Waxaan ku hanweynahay inaan maqalka aad ka oo ku saabsan tallaabooyinka xiga ee geedi socodka qorista. Fadlan ha ka waaban inaad ila soo xiriir haddii aan ku siin kara macluumaad dheeraad ah.
Haddii aadan helin shaqada, diri aad ku waraysanaya note ah isaga ama iyada mahad waayo, waxaad la waraysanayo. Weydii haddii ay idin siin doonaa warcelin ku saabsan sababta aad shaqada ma heli. U sheeg in aad ku talo jirto waraysi ah loogu shaqooyin badan oo aad rabto in la hagaajiyo. Ma aha qof kasta kuu jawaabi doonaa,, laakiin qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah comments oo kaa caawin doona inaad Liibaantaane marka xigta!
Raadi fursado shaqo ee magaaladaada
sidoo Ma at shaqada
Saxiix si ay u bartaan Ingiriisi goobta for free
Ha aad qabto su'aalo dheeraad ah oo xirfadiisa?
Weydii qaxootiga kale iyo muhaajiriinta talo ku saabsan Forums our.